विपत्तिपर्दा कस्ता कुरामा संझौता गर्नुपर्दछ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन - Harekpal
नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् १९ चैत्र २०७६, बुधबार ०२:३० मा प्रकाशित
सर्वनाशे च सञ्जाते प्राणानामपि संशये ।
अपि शत्रुं प्राणम्याऽपि रक्षेत् प्राणान् धनानि च ।।– पञ्चतन्त्र, ४।२२
सर्वनाश र प्राणसंशय उत्पन्न भयो भने शत्रुलाई प्रणाम गरेर भए पनि आफ्नो प्राण र धनको रक्षा गर्नुृपर्दछ ।
विपत्ति परेका वेल शत्रु भनेर शत्रुताको व्यवहार गर्नुहुँदैन भनिएको छ । जतिसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि प्राणको रक्षाका निम्ति शत्रुसँग मित्र भाव राख्नुपर्दछ । प्राणको संकट आउने अवस्थामा शत्रुताको भावलाई त्याग गर्नसक्नुपर्दछ भनिएको हो ।
विपद् यसैपनि कठिन नै हुन्छ । विपत्मा एक आपसमा शत्रुभाव जागृत गर्नाले दुवैको प्राण संकटमा पर्नसक्छ । जस्तोसुकै परं शत्रु नै भए पनि विपत्तिमा मैत्री संबन्ध गाँस्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले विपत्तिमा सर्वप्रथम आफ्नो रक्षाका साथै आफ्ना सम्पत्तिको पनि रक्ष गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
विपद्मा बुद्धिको प्रयोग गरी संयम अपनाउन उपयुक्त हुन्छ । धैर्यका साथै बुद्धिपषको प्रयोग गरी सर्वहितकारी नीति लिन सकियो भने विपद्को घडी टर्न सक्छ । अन्यथा शत्रुको प्रहारले विपद्मा जीवन पनि जानसक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले संकटमा शत्रुभाव त्याग गरी मैत्री सम्बन्ध गर्नुपर्दछ । शत्रु नै भए पनि उसलाई नमस्कार गरेर विपद्मा जोगिनुपर्छ भन्ने पञ्चतन्त्रको नीति वचन मननीय छ ।
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:३०
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:३०
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार २१:३०
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:३०
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार २०:३०
धन कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन